Didi ၏ "Hongye" စီမံကိန်း ကိုဖော်ထုတ် ခဲ့ပြီး အွန်လိုင်း ကား ကုမ္ပဏီ ၉၀ ကိုဆွဲဆောင် ခဲ့သည် - Pandaily
Didi ၏ “Hongye” စီမံကိန်း ကိုဖော်ထုတ် ခဲ့ပြီး အွန်လိုင်း ကား ကုမ္ပဏီ ၉၀ ကိုဆွဲဆောင် ခဲ့သည်
Jun 02, 2022, 12:11ညနေ 2022/06/02 14:11:29 Pandaily
China Ride Platform Didi ၏အတွင်းပိုင်း စီမံကိန်း “Hongye” သည် အနည်းဆုံး ယာဉ်မောင်း သူ အက် ပလီကေးရှင်း ၅၀ ကိုတီထွင် ခဲ့ပြီး အွန်လိုင်း စီးနင်း ကုမ္ပဏီ ၉၀ နီးပါး နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။Phoenixၾကာသပေတး ေန႔က သတင္းေပးပို႔ ခဲ့ပါတယ္။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် Didi သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၌ ဒေါ်လာ ၄. ၄ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိ လူသိရှင်ကြား စာရင်း ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရက်အနည်းငယ် အကြာတွင်တရုတ် ထိန်းညှိကုမ္ပဏီ အတွက် လုံခြုံရေး ပြန်လည်သုံးသပ် မှု စတင်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ အက်ပ် ၂၅ ခုကို ပြည်တွင်း အက် ပလီကေးရှင်း များမှ ဖယ်ရှား ခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်စတင် ခဲ့သော Didi ၏ လွတ်လပ်သော ကား အမှတ်တံဆိပ် Flower Piggy သည် လုံခြုံရေး ပြန်လည်သုံးသပ် မှုကြောင့် ထိခိုက်မှု မရှိသော application အနည်းငယ် ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် လေး လတာ ကာလအတွင်း အိမ်တွင်း COVID-19 ကပ် ရောဂါ ကဲ့သို့ သောအချက် များကြောင့် အွန်လိုင်း စီးနင်း မှု ပလက်ဖောင်း များအတွက် အမှာစာ များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကျဆင်းခဲ့ပြီး Piggy Piggy အတွက် အမှာစာ များ တိုးများ လာခဲ့သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှ ဇန်နဝါရီ မှ April ပြီ လအထိ အချက်အလက်များအရ Huaxiaozhu အမှာစာ များ၏ လစဉ် တိုးတက် မှုနှုန်းမှာ ၄. ၄% ၊ ၂၆. ၈% ၊ ၃. ၁% နှင့် ၁. ၄% အသီးသီးရှိသည်။
Hua Xiaozhu သည် Hongye ဟုခေါ်သော စီမံကိန်းအတွက် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သုတေသနပြု ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် Hongye သည် အွန်လိုင်း ကား ငှားရမ်း သည့် ကုမ္ပဏီ ၉၀ နီးပါး ကိုဆွဲဆောင် နိုင်ခဲ့သည်။
Honghu စီမံကိန်း မှ အဖွဲ့ဝင်များ စွ ာက ယခုနှစ် အစောပိုင်း တရုတ် နှစ်သစ်ကူး အပြီးတွင် Didi ၏ နှုတ်ထွက် မှုသည် Hua Piggy ၏အဖွဲ့ အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိကြောင်း၊ ၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းများ၏ ထက်ဝက် နီးပါး သည် Honghu စီမံကိန်း သို့ ၀ င်ရောက် ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ Hongye သည် အနည်းဆုံး ယာဉ်မောင်း သူ အက် ပလီကေးရှင်း ၅၀ ကို ပေါက်ဖွား ခဲ့ပြီးထို အရေအတွက်မှာ ဆက်လက် တိုးပွား လျက်ရှိသည်။
ဒီ ယာဥ္ေမာင္း ဘက္က App ေတြ၊ Flower Piggy ေတြ ေပး ထားေပမယ့္ ခရီးသည္ ဘက္က App ေတြ မရွိပါဘူး။ ခရီးသည် များသည် Flower Piggy နှင့် Didi မှသာ မှာယူ နိုင်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:China FAW သည် Didi ကိုဝယ်ယူ ခြင်းကို ငြင်းဆို ခဲ့သည်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Hua Piggy ၏ အမှာစာ လိုက်နာ မှုနှုန်းသည် လစဉ် နီးပါး တွင် ၃၅% သာရှိသည်။ Third-party ပလက်ဖောင်း များကို mashup အသုံးပြုခြင်းသည် လိုက်နာ မှုနှုန်း ကိုထပ်မံ လျှော့ချ နိုင်ပြီး Hua Piggy နှင့် Didi တို့၏ အမှတ်တံဆိပ် ကိုပိုမို အကျိုးသက်ရောက် စေနိုင်သည်။